मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, संसद् बैठक आह्वानका लागि सिफारिस होला ? - Everest Dainik - News from Nepal
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, संसद् बैठक आह्वानका लागि सिफारिस होला ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि आज पहिलो पटक मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका छन् ।
बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा साँझ ५ बजे बस्ने तय भएको छ ।
गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो । आजको बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ओलीको चेतावनी : अदालतलाई अलमल्याउने काम बन्द गर्नुस्
कतिपयले संसद अधिवेशन बोलाउनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन सक्ने आकलन पनि गरेका छन् ।
ट्याग्स: केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, संसद् बैठक